Football Khabar » कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाको अवस्था कस्तो ? यसो भन्छन् अगुइरो
कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाको अवस्था कस्तो ? यसो भन्छन् अगुइरो
अर्को महिना (जुन १४) बाट दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका सुरु हुँदैछ । ब्राजिलमा हुने प्रतियोगितामा यसपटक १२ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
साबिक विजेता चिली तथा उपविजेता अर्जेन्टिना यसपटक पनि उपाधि होडमा हुनेछन् । त्यसैगरी, उरुग्वे र जापानलाई समेत उपाधि दाबेदार मानिएको छ । ब्राजिललाई यसपटक सबैभन्दा बलियो उपाधि दाबेदार टिमका रूपमा धेरैले हेरेका छन् ।
सो प्रतियोगिता आउन दुई साता बाँकी छँदा अर्जेन्टिनाका स्टार फरार्ड सर्जियो अगुइरोले आफ्नो टिमको अवस्थाबारे बोलेका छन् । अर्जेन्टिना अहिले कोपाअघि हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयारी तथा प्रशिक्षणमा व्यस्त छ ।
सो खेलअघि अगुइरोले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूहरूले कोपाका लागि स–साना कुरामा तयारी गरिरहेको बताए । उनले कोपा ठूलो प्रतियोगिता भएको उल्लेख गर्दै खेलाडी र प्रशिक्षक गम्भीर रहेको बताए । ‘हामीसँग अझै दुई साताको समय छ । तर, हामी अहिलेबाटै तयारीमा छौं,’ गुइरोले भने, ‘हामी साना–साना कुराबाट तयारी गरिरहेका छौं ।’
कोपामा अर्जेन्टिनाको हैसियत उपाधि दाबेदार टिमका रूपमा रहने बताए । ‘हामी साबिक उपविजेता टिम हौं । तसर्थ हामी यसपटक पनि उपाधि दाबेदार टिमका रूपमा ब्राजिल पुग्नेछौं । त्यहाँ थुप्रै बलिया टिम छन्,’ अगुइरोले भने, ‘हाम्रा नजरमा सबै उपाधि दाबेदार टिम हुन् । मैदानमा प्रोफाइलभन्दा पनि ९० मिनेटको प्रदर्शन मुख्य हुन्छ ।’
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका फरवार्ड अगुइरोले आफूहरू सधैंझै यसपटक पनि उपाधि जित्नकै लागि खेल्ने बताए । ‘यो प्रतियोगिता हाम्रा लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । हामी दबामा छौं, त्योभन्दा बढी उत्साहित छौं,’ अगुइरोले थपे ।
कोपामा अर्जेन्टिना समूह ‘बी’मा छ । सो समूहमा अर्जेन्टिनासँगै कोलम्बिया, पराग्वे र पाहुना टोली कतार रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १५:३७